दुई वटा गाडीको नम्बर प्लेट एउटै, त्यो पनि मन्त्रीकै ! – Khabar Silo
काठमाडौं– सामान्यतया चोरी तथा आपराधिक गिरोहले नम्बर प्लेट फेरेर आपराधिक गतिविधि बढाउने गरेको विषय नौलो होइन । एउटै नम्बर प्लेट भएका सवारी साधान बेला बखत ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको पनि पाइएकै हौ । हालै एउटै नम्बर प्लेट भएको दुई वटा सवारी साधानको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
सरकारी गाडी एउटै नम्बर प्लेटको रहेको भन्दै पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले फेसबुकमा लेखेका छन्– मन्त्री चढ्ने २ गाडीको प्लेट एउटै नम्बर । पार्किङ गरी राखिएका दुई वटै गाडीको नम्बर प्लेटमा बा २ झ ३५३२ रहेको छ । मन्त्री चढ्ने गाडीको नम्बर प्लेट एउटै भएपछि सामाजिक सञ्जनालमा तस्वीर भाइरल बनेको छ ।
काठमाडौं- जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालमा उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली सक्रिय नभए पनि पहाडी क्षेत्रका एक दुई ठाउँमा वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ । आगामी तीन दिनको मौसमको पूर्वानुमान जारी गर्दै महाशाखाले हाल देशका अधिकांश पहाडी स्थानहरूमा आंशिक बदली र केहि स्थानमा तुवालो पनि लागेको जनाएको हो । आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान फागुन […]
मदिरा व्यवसायी भन्छन्- भाटभटेनीले रक्सी बेच्यो, सरकार भन्छ- समात्छौं !
३० वैशाख, काठमाडौं । लकडाउनका बेला सुपरमार्केटहरुबाट मदिरा बिक्री गरिएकोे तर, साना पसलहरुलाई रोकिएको भन्दै मदिरा व्यवसायीहरुले सरकारको आलोचना गरेका छन् । देशभरका मदिरा व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल मदिरा व्यवसायी महासंघले सुरक्षा उपाय अपनाएर मदिरा व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सरकारको वैशाख २२ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मार्ट र सुपर […]
प्रदेशमा प्राय नेपाली मान्छेहरुकाे ज्यान गइरहेकाे हामीले सुनिरहन्छाैँ । यी यस्ता घटनाहरु प्रत्येकदिन जसोनै घटिनैरहन्छन् । त्यस्तै, सुर्खेत जिल्ला चौपान्य गाउ`पालिका वडा नं ४ का गगन बहादुर राव जो कामको शिलशिलामा कोरियासम्म पुगेका थिए र दैवको यो कस्तो खेल कमाउन गएको छोरो बाक समा फर्कियो । यो घटना यसरी पनि अति दर्द नाक भयो कि […]
घर फर्किएका नेपाली भन्छन्- ‘फर्कनै पाइँदैन जस्तो लागेको थियो, अहिले हर्षित छौं’